इलेक्ट्रोनिक र म्याकेनिकल रिसाइकलिंग वस्तुहरूको र कसरी पुन: प्रयोग गर्ने - Ikkaro
भाँडाको इलेक्ट्रोनिक र मेकानिकल रिसाइक्लि।
हामी यसका लागि नयाँ सबसन सुरू गर्दछौं रिसाइकल हामीसँग हाम्रा घरहरूमा भएका सबै स्पष्ट रूपमा प्रयोग नहुने उपकरणहरू छन् र हामी फ्याँकिरहेका छौं, वा उपकरणहरू जुन मित्र वा परिवारले हामीलाई दिएका छन्।
मेरो मतलब फ्लपी ड्राइभ, बच्चा खेलौना वा चिनियाँ हो। ड्रायर, थर्मस, टेलिभिजन, राउटर, मोबाइल र स्मार्टफोन, आदि, आदि। हामी फोहोरहरू हामी कति उत्पन्न गर्छौं भन्ने बारे सचेत छैनौं, हामीले खेर फाल्यौं ...
हामी विशिष्ट प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छौं।
म के गर्न सक्छु ...?
म के फाइदा लिन सक्छु ...?
हामी उनीहरूलाई पृथक गर्न, विभिन्न कम्पोनेन्टहरू पत्ता लगाउने र कुन फाइदा लिन सक्छौं वा पुन: प्रयोग गर्न सक्दछौं र के को लागी हेर्नुहोस्।
हामी भाग मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक मा प्रभागहरु बनाउन को लागी कोशिश गर्नेछौं।
हामी सहयोग वा सल्लाह प्राप्त गर्न पाउँदा खुसी छौं।
यो मेरो मनपर्ने सेक्सनहरूमध्ये एक हो, मैले आफ्नो जीवनको चीजहरू अलग पारेर यसलाई दोस्रो, तेस्रो र धेरै प्रयोग दिन प्रयास गरें। म वास्तवमै विश्वास गर्दछु कि यो मरम्मत मात्र नभई पुनः प्रयोग र रिसायकल गर्न आवश्यक छ। केहि चीज जुन हामी बारे सचेत हुनुपर्दछ र त्यो स्कूलमा जवान व्यक्तिहरूमा, परिवारमा, धेरै कलिलो उमेरदेखि नै हुनुपर्दछ। राम्रो संसारको लागि।
पुन: साइकल सौर प्यानल मा ब्याट्री प्रयोग
बाट अन्वेषकहरु एमआईटी मा एक विधि बनाएको छ रीसायकल प्रयोग गरिएको कार ब्याट्रीहरू र सौर प्यानलहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्नुहोस्.
अहिलेसम्म, संयुक्त राज्य अमेरिकामा lead ०% नेतृत्वमा आधारित कार ब्याट्रीहरू अधिक ब्याट्रीहरू बनाउन पुन: साइकल गरिन्छ, तर यस्तो समय आउनेछ जब यस प्रविधिलाई अन्य प्रकारका ब्याट्रीहरूले प्रतिस्थापन गर्नेछन् र यदि सम्भव छैन / रिसायकल गर्न चासो छ भने। तिनीहरूलाई तिनीहरू गम्भीर हुन सक्छ वातावरणीय समस्या.
त्यसैले एमआईटीले धेरै राम्रो समाधान फेला पारेको छ। एक सरल प्रक्रियाको साथ तिनीहरूलाई पुन: साइकल गर्न अनुमति दिन्छ तिनीहरूलाई सौर प्यानलमा परिवर्तन गर्न। र राम्रो कुरा यो हो कि यी प्लेटहरू जब तिनीहरू भाँच्दछन् नयाँ बोर्डहरूमा पुन: साइकल गर्न सकिन्छ.
साथै, फाइदाहरू यहाँ समाप्त हुँदैनन्। प्रक्रिया खनिजबाट सिसा निकाल्न प्रयोग गरिएको भन्दा कम प्रदूषणकारी छ। त्यसैले सबै कुरा सही देखिन्छ। पनि यी नयाँ प्लेटहरूको दक्षता जुन करीव १ around% छ लगभग अन्य टेक्नोलोजीहरूको साथ प्राप्त अधिकतम को रूप मा समान। हराएको मात्र चीज भनेको कम्पनी हो जुन यसलाई मार्केटिंगमा समर्पित छ।
एक साइकल डायनामा भेला पार्दै
मैले पुनः प्राप्त गरें पुरानो डायनामा त्यसले काम गर्दैन। A डाइनमो एक छ इलेक्ट्रिक जेनरेटर मेकानिकल ऊर्जालाई प्रत्यक्ष विद्युतीय प्रवाहमा रूपान्तरण गर्न।
गिलास दही कप पुनः प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले गिलास टबमा दही खानुहुन्छ भने निश्चय पनि तपाईंले चश्मालाई अनियन्त्रित केही गर्न बचत गर्नुभएको छ र अन्तमा तिनीहरू रद्दीटोकरीमा भण्डारमा वा धेरै नराम्रो भण्डारमा अन्त हुन्छन्।
कसरी सिलिका जेल पुन: प्रयोग र रीसायकल गर्ने
El सिलिका जेल यो एक सुक्खा एजेन्ट को रूप मा प्रयोग गरीन्छ एक बादलको आर्द्रता नियन्त्रण गर्न। यसको उच्च porosity यो एक राम्रो नमी शोषक बनाउँछ। तपाईले हेर्नुहुने छ तर त्यहाँ कुरा छ सिलिका जेल, यो जेल होईन, तर ठोस हो।
यी झोलाहरू फेला पर्दछ जब हामी जुत्ता, कपडा, र अन्य धेरै वस्तुहरू खरीद गर्दछौं। र धेरै पटक हामी तिनीहरूसँग के गर्ने भनेर जान्दैनौं र तिनीहरू रद्दीटोकरीमा समाप्त हुन्छन्।
सिलिका जेलले कोबाल्ट क्लोराइड समावेश गर्दछ, जुन, ओसको साथ प्रतिक्रिया गर्दा, नीलो देखि गुलाबीमा बदलिन्छ। यस उत्पादनलाई ह्यान्डल गर्दा बनाइएको धुलोले सिलिकोसिस निम्त्याउन सक्छ, त्यसैले यसलाई क्रश नगर्नुहोस् वा त्यस्तै चीजहरू।
रीसायकल Styrofoam वा Styrofoam
El extruded polystyrene (XPS), जुन नाममा मार्केटिंग गरिएको छ Stryrofoam, यो%%% पॉलीस्टीरिन र%% ग्यासले बनेको छ जुन एक्सट्रुसन प्रक्रियामा फसेको छ।
को रासायनिक संरचना extruded polystyrene त्योसँग मिल्दोजुल्दो छ Polstyrene विस्तारित। तर आकार दिने प्रक्रिया स्टायरोफोम, यसले अधिक थर्मल प्रतिरोध दिन्छ र यसलाई पानीलाई राम्रोसँग सहन गर्दछ।
यदि तपाइँलाई थाहा छैन कि पॉलीस्टीरिन के हो, यो कर्क हो, सबै जीवनको सेतो, र स्टायरोफोम, एक हो जुन तपाईंलाई कहिलेकाँही कठोर भेटिन्छ। यो फोम हो जुन हामी देख्छौं कि उनीहरू घरहरू निर्माणमा इन्सुलेशनको लागि प्रयोग गर्छन्
धुने मेसिनको पानी पुनः प्रयोग गर्नुहोस्
Http://comiendo.wordpress.com/category/eco-chismes/ बाट मानुएलले हामीलाई यो लेख वॉशिंग मेशीनको पानी पुन: प्रयोग गर्न पठाइएको छ।
किनकि हामीले प्रयोग गर्यौं इकोबाल नुहाउन, हामी सोच्छौं कसरी धुने मेसिनमा पानीको पुन: उपयोग गर्ने बगैंचालाई पानी दिनुहोस् यो रसायन बिना बाहिर आउँछ भन्ने तथ्यलाई फाइदा उठाउँदै। किनकि धुने मिसिन ग्यारेजमा छ, त्यहाँ परीक्षणहरूको लागि ठाउँ थियो र भरपर्दो र स्वायत्त प्रणाली स्थापना गर्न। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको कुञ्जी टर्नु हो जुन तपाईं साबुन प्रयोग गर्नुहुन्छ वा धुनेमा होइन। खैर यो आविष्कारमा जान्छ, राम्रोसँग नालीमा। जाडोमा हामीसँग प्रशस्त मात्रामा पानी हुन्छ तर गर्मीमा उत्पन्न हुने सबै पर्याप्त हुँदैन।
पुन: साइकल टुक्राको साथ चेस बनाउनुहोस्
के तपाई लाई मन पर्छ? शतरंज? यी मोडेलहरूको साथ तपाईं प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ रिसाइक्ड सामग्रीको साथ तपाइँको आफ्नै शतरंज सिर्जना गर्नुहोस्,
बोल्ट र नटसँग शतरंज
विशेष गरी पागल, स्प्रि ,हरू, वाशरहरू र स्क्रूको साथ।
यस अवस्थामा, टुक्रा शतरंज संग बनेको छ कार भागहरु.
कसरी बाइकको घण्टीले काम गर्दछ
आज हामीले सम्झनको लागि भाँडो खोल्यौं। ¿जोसँग यस घण्टीको साथ बच्चाको रूपमा बाइक छैन?.
मलाई लाग्छ कि सबै छ आधुनिक मेकानिक्सको एक क्लासिक, ejejej।
यसको अपरेशन अत्यन्त सरल छ।